नगरपालिका फुटपाथ ‘क्लियर’ गर्न सक्ला ? | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
नगरपालिका फुटपाथ ‘क्लियर’ गर्न सक्ला ?
Published On : २५ श्रावण २०७६, शनिबार ०९:१८
गोरखा घ्याम्पेशाल सडकको घ्याम्पेशालदेखि फिनामसम्म सडक कालोपत्रे करिब सम्पन्न हुने भएको छ । सात मिटर चौडा गरेर कालोपत्रे गर्ने काम केही मात्र बाँकी छ । त्यो पनि भदौ दोस्रो सातासम्म भइसक्ने योजना कार्यालयले जनाएको छ । तर दुखद पक्ष के भने, गोरखा बजारको हरमटारीचोकदेखि फिनामसम्म सडक ज्यादै जीर्ण छ ।
यो योजनाले गोरखा बजारदेखि घ्याम्पेशालसम्म सडक चौडा बढाउने र कालोपत्रेको काम गर्ने प्रस्ताब गरेको थियो । तर गोरखा फिनाम खण्डको सडक छेउमा घर हुनेहरुले सडक चौडा बनाउन अबरोध गरेपछि सो योजनाले हात झिक्यो ।
मापदण्ड अनुसारको चौडा नपाएसम्म कालोपत्रे गर्न कुनै पनि योजनाले मान्दैन, चौडा गर्न स्थानीयबासी मान्दैनन् । यसोभए के अब यो खण्डको अबस्था सँधै यस्तै हुने हो ? यो अनुत्तरित प्रश्न हो ।
यही सन्दर्भमा गोरखा नगरपालिकाले वडा नं. ८ अन्तर्गतको सडक क्षेत्रभित्रको संरचना हटाउने अभियान अघि सारेको छ । धमाधम सडक क्षेत्र पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ । कतै सडक क्षेत्रभित्र पसलका सामान राखिएका छन्, कतै अस्थायी संरचना नै बनेका छन् । कतै गाडी धुने ठाउँ बनेका छन् इत्यादि ।
यो अबस्थाको अन्त्य गर्न नगरपालिका सक्षम होला ? यदि यहाँ सफल भयो भने गोरखा बजारदेखि फिनामसम्मको सडक क्षेत्र बिस्तार गर्न पनि सफल हुनेछ अनि सडक क्षेत्र विस्तार गरी कालोपत्रे हुनेछ ।
तर नगरपालिकाले यो थालनी गरेको ठाउँमा गरिपु¥याउन सक्छ कि सक्दैन ? सन्देह छ ।
कुनै समय थियो, युवाहरु बर्खाको भेल मडारिए झै विदेशतिर बग्ने । अहिले त्यो अबस्था छैन